Tsy mbola vita eo, fa ho hita eo… | NewsMada
Tsy mbola vita eo, fa ho hita eo…
Par Taratra sur 28/05/2019
Vita iny ny latsa-bato, na ambany be aza ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy. Nizotra ihany… Eny, na teo aza ny fanahiana na fanahy iniana tetsy sy teroa: fahadisoana na tsy fahatombanana. “Indro kely”, mety ho “indro be” ho an’ny sasany fa nitera-pahavoazana na fatiantoka aza. Tanàna tsy ilaozan’adala, olombelona tsy ialam-pahadisoana.
Tratra aoriana ny fanombohan’ny fandatsaham-bato tamin’ny biraom-pifidianana sasany; tsy nampifankahazo ny amin’ny delegen’ny kandidà, efatra farafahabeny no ao amin’ny biraom-pifidianana iray; nanahirana ny fitomboan’ny biraom-pifidianana fa noferana 700 ny isan’ny mpifidy, tsy nahitan’ny sasany izay tokony handatsahany vato…
Nilamina ny fandatsaham-bato? Mbola ady fiady, ohatra, ny fiarovana ny safidin’ny tena: tsy vitan’ny fanaraha-maso ny fanisam-bato fa eo indrindra koa ny fitaterana ny vokatra. Ndrao miova, na kely aza ny fari-pifidianana ary vitsy ny mpifidy. Raha sanatria misy ny tsy ara-dalàna na mampanahy, mila fahasahiana hanaovana fampitahana, fitoriana…
Mbola tsy vitan’izay, solontenan’ny vahoaka ireo nofidina: tena mitondra teny, manao tatitra, manao tolo-dalàna ho amin’ny tombontsoam-bahoaka, manara-maso ny mpanatanteraka…? Tsy latsak’izany ny fitakiana ny tamberin’andraikitra amin’ny fanatanterahana ireo asany ireo, indrindra izay nampanantenaina tamin’ny fampielezan-kevitra.
Fifanarahana politika ary fifanekena sosialy ny latsa-bato ataon’ny olom-pirenena amin’izay fidiny: mila hajaina sy tanterahina, tsara arahi-maso sy ampahatsiahivina… Ndrao tsy araka izay nampanantenaina izay efaina? Misy tsinona ny mitady toerana fotsiny, na mitetika ny Antenimierampirenena ho fialokalofan’ny hoe tsimatimanota, sanatria.
Tsy vitan’ny latsa-bato àry ny raharaha. Eo amin’ny fandraisan’ny solombavambahoaka ny asany vao tena manomboka: iza no tena manaja ny vahoaka nifidy azy, tsy mivadi-bolana, tsy mivadika antoko na vondrona politika… Ho hita eo! Fifidianana tomponandraikitra no natao fa tsy vitan’ny fandatsahana sy ny fanisam-bato fotsiny.